သင့်အရေပြားကို အဆိုးဆုံးဒုက္ခပေးမဲ့ အရာတွေ | OnDoctor
သင့်အရေပြားကို အဆိုးဆုံးဒုက္ခပေးမဲ့ အရာတွေ
in ကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံ, အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
လှပတဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်နဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ လူတိုင်းက လိုလားကြပါတယ်။ ဒီလို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဘယ် နာမည်ကြီးတံဆိပ်ကို သုံးရပါ့မလဲ ၊ မျက်နှာပေါ်မှာ ဘာတွေ ကပ်ရမလဲ ၊ ဘာတွေ စားရမလဲ ၊ ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲ စသဖြင့် လိုက်ရှာရတာ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အချိန်ကုန် ရတာဟာ မနည်းပါဘူး။ နာမည်ကြီးတဲ့ အလှကုန်တွေကို သုံးဖို့ အတွက် မစားရက် မသောက်ရက် ပိုက်ဆံ စုရတာလည်း များလှပါပြီ။ မဟုတ်ဘူးလား ??
မျက်နှာ အသားအရေကို မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းရာမှာ အခြေခံ အကျဆုံး အချက် ၂ ချက် ရှိပါတယ် ။ ကိုယ်ရဲ့ အသားအရေကို မပျက်စီးအောင် ဂရုစိုက်ဖို့ ရယ် နဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အသားအရည် ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခါ လိုအပ်သလို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးတာရယ် ပါပဲ။
နေ့စဉ် သွားလာစားသောက် နေတဲ့ အခါ အသားအရေ ကို ပျက်စီးစေမယ့် အရာတွေနဲ့ ထိတွေ့နေတာကိုတော့ ဂရုမစိုက်ဘဲ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီၤး အသားအရေ ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ချည်းပဲ အားကိုးနေတာဟာ ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး အကျိုးနည်းတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေ ပျက်စီးမှုက ထိန်းသိမ်းမှုထက် ပိုများနေတယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လုပ်တဲ့ အရာတွေဟာ အိတ်ပေါက် နဲ့ ဖားကောက် သလိုသာ ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။
အသားအရေကို ပျက်စီးစေမယ့် အရာတွေက ဘာတွေလဲ ???
နေ့စဉ် အထိတွေ့ဆုံး အရာတွေထဲက ပြောပြရရင်တော့ နေရောင်ခြည် နဲ့ ရာသီဥတုပါပဲ ။
ဒီနှစ်ခု နဲ့ မကြုံတွေ့ဖို့ ရှောင်လို့ မရတဲ့ အတွက် ဒါတွေနဲ့ ထိတွေ့ရမယ့် အချိန်မှာ ဒါတွေကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးဖို့ကို ဘယ်လို အတတ်နိုင်ဆုံး လျော့နည်းအောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို တွေးရပါမယ်။
အစားအသောက်တွေထဲမှာလည်း အသားအရေအတွက် မကောင်းတာတွေ ရှိတဲ့ အတွက် ဒါတွေကိုလည်း သိရှိထားပြီး များများမစားမိဖို့ သတိပြုရပါမယ်။
၁) နေရောင်ခြည် ပြင်းပြင်းနဲ့ ထိတွေ့တာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အပြင်သွားရင် ထီဆောင်းတာ ၊ ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ အပြင်ထွက်တာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်တာတွေကို လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ မသွားမဖြစ် သွားရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း အင်္ကျီ အရောင်ဖျော့ဖျော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကို လက်ရှည်ဝတ်သွားတာမျိုး ၊ နေရောင် ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ SPF နဲ့ PA ပါဝင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို လိမ်းပေးတာမျိုး တွေကို လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၂) စာရေးသူတို့ နိုင်ငံမှာ ရာသီဥတု သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
နွေရာသီ မှာ ရာသီဥတု ပူပြင်းတယ်။ ချွေးထွက်တယ်။ မိတ်ကပ်တွေလည်း ခဏခဏ ပျက်တယ်။ ဒီအခါ မိတ်ကပ် မလိမ်းမနေရ ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမှာ မျက်နှာပြန်သစ်ပြီး မိတ်ကပ် ပြန်လိမ်းရပြန်ရော။
မိတ်ကပ်တွေ ခဏခဏ လိမ်းတာဟာ အသားအရေ ကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အတွက် ဒီလို ရာသီမျိုးမှာ နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ UV အလင်းရောင် တွေကလည်း ကာကွယ်နိုင်သလို မိတ်ကပ်ကိုလည်း ကြာရှည်ခံစေမယ့် မိတ်ကပ်အောက်ခံ မျိုးတွေကို ရွေးချယ်လိမ်းသင့်ပါတယ်။
ဆောင်း ရာသီမှာတော့ အသားအရေ ခြောက်သွေ့မှုတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီလို ရာသီမျိုးမှာတော့ အသားအရေ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးနိုင်တဲ့ အလှကုန်တွေကို သုံးပေးသင့်တယ် ဆိုတာကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
၃) ကိုယ် နေ့စဉ် စားသောက်နေတဲ့ အရာတွေထဲ မှာလည်း အသားအရေကို ပျက်စီးစေနိုင်မယ့် အရာတွေ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်မျှ တစ်ခါတစ်ရံ စားမိတဲ့ အခါ ပြဿနာ မရှိနိုင်ပေမဲ့ အများကြီးစားမိရင်တော့ အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အချိုဓာတ်များတဲ့ အစားအသာက်တွေကို များများစားသောက်ခြင်းဟာ အရေပြားအတွက် မကောင်းဘူးလို့ ပညာရှင်တွေက ယူဆထားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလို အရာတွေကို လွန်ကဲအောင် မစားမိဖို့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
၄) မိတ်ကပ်တွေကို မဖျက်ဘဲ ထားတာဟာလည်း အသားအရေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
အလုပ် ပင်ပန်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပျင်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိတ်ကပ် ကို မဖျက်ဘဲ အိပ်ပျော်သွားတတ်ပါတယ်။
မိတ်ကပ်တွေကို မျက်နှာပေါ်မှာ အကြာကြီးထားမယ် ဆိုရင် ဒါတွေဟာ အသားအရေပေါ်မှာ ဆိုးကျိုးတွေကို အများကြီး ဖြစ်စေပါတယ်။
မိတ်ကပ်ကို ဖျက်ရတဲ့ အချိန် တစ်ခဏဟာ အသားအရေ ပျက်စီးလို့ လိုက်ပြုပြင်နေရတဲ့ အချိန် နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အလွန် နည်းတဲ့ အတွက် အချိန်ယူပြီး မိတ်ကပ်ဖျက်ကြဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
အသားအရေကို မပျက်စီးအောင် အရင် ဂရုစိုက်ပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းပေးတာဟာ သင့် အသားအရေကို စိုပြည်စေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။
ရာသီသွေးဆင်းတာများရင် ဆရာဝန်ပြဖို့ လိုကိုလိုသလား
ပိန်ချင်ရင် “အာဘွား” မှန်မှန်ပေးပါ
ပိန်ချင်ရင် "အာဘွား" မှန်မှန်ပေးပါ